निशान बुढाथाेकी 2021-09-18 20:58:00
पश्चिम नेपालको तनहुँ जिल्ला ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष प्रेम कुमार श्रेष्ठसंग नामी साप्ताहिकका लागि निशान बुढाथोकीले लिएको अन्तरवार्ताको सारसंक्षेप :–
यहाँको करिब ५ वर्षको कार्यकाल सकिन लागेको छ ! पक्कै पनि विभिन्न खालका योजनाहरु अघि सारेर निर्वाचित हुनुभएको थियो, यसरी समुदायलाई जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर निर्वाचित हुनु भयो, ती योजनाहरु कति हदसम्म पूरा भएको अनुभव गर्नु भएको छ ?
चौध/पन्ध्र वर्ष पहिला कर्मचारीहरुले चलाएर बसेको अवस्था र अहिले जनप्रतिनिधिहरु जुन स्थानिय निर्वाचन भइसकेपछि आएको नयाँ नयाँ गतिविधि र योजनाहरु हामीले आफ्नो वडामा अगाडि बढाएका छौं। सर्वसाधारणहरु कोही पनि बेखुशी हुनुहुन्न। सबै जना खुशी नै हुनुहुन्छ ।
विशेष गरी कस्ता खालका कामहरु भएका छन् यो नगरपालिकामा ?
वास्तवमा भन्ने हो भने म जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि म नगरपालिका टोल विकास समितिको नगर संयोजक थिए। त्यतिखेरको अवस्थामा पनि म सबैसंग समन्वय गरी हातेमालो गर्दै विकास निर्माणका कामहरु गर्दै आइरहेको थिए। अहिले म जनप्रतिनिधि भैसकेकेको अवस्थामा पनि हामीले पहिलो काम नै अनसन चौतारा भन्ने निर्माण गर्याै‌। शायद यस्तो ठूलो चौतारा नेपाल अधिराज्य भरी नै छैन होला। त्यसपछि हस्पिटल जाने बाटो निर्माण गर्याै। स्थानिय स्तरबाट पनि राम्रो खालको प्रतिक्रिया आउनुको साथै साथ र सहयोग पनि पाइरहेका छौं।
खासमा अनसन चौतारा भनेको के हो ?
खासमा भन्नुपर्दा यहाँ वर र पिपल भएको धेरै चौताराहरु थिए । त्यसलाई एक रुपता बनाएर बनाएर ढुंगाहरु छापेर बस्न योग्य बनाएका छौं। जो कोही पनि यहाँ आएर आराम गर्न, खेल्न मिल्ने गरी बनाएको चौतारी अनसन चौतारी हो।
विकास निर्माणका कामहरु अन्र्तगत खानेपानी ढल व्यवस्थापन तथा बाटोघाटोका कामहरु कत्तिको सम्पन्न भएको छ ?
खासमा भन्नुपर्दा स्थानिय जनताहरु कस्ता खालका समस्याहरु लिएर आउनुहुन्छ ?
धेरै वर्ष स्थानिय सरकार नहुँदा सर्वसाधारणका धेरै समस्याहरु थिए। त्यसमा पनि उहाँहरुको समस्या भनेको ढल व्यवस्थापन नै थियो। स्थानिय निर्वाचन भइसकेपछि हामीले तुरुन्तै बजेट छुट्यायौं र प्रत्येक स्थानियको घर–घरमा ढल व्यवस्थापन गर्याै‌। हामी पार्टीगत रुपमा हेदैनौं, विपक्षी पार्टी पनि हामीलाई साथ र सहयोग एवं सल्लाह, सुझाव दिदै हातेमालो गरी अगाडि बढिरहेका छौं।
महिला तथा बालबालिकाको लागि कस्तो खालको कार्यक्रमहरु लयाउनु भएको छ ?
हेर्नुस् वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले महिला दिदी बहिनीको लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं। विभिन्न सिपमुलक तालिम दिनुका साथै लक्षित वर्गका महिलालाई तालिम दिदै आएका छौं। सिलाई, बुनाइ लगायत तरकारी खेती त्यसमा पनि कौंसी खेतीलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आय आर्जनका कामहरुमा उत्प्रेरणा दिदै आएका छौं।
काम गर्दा कस्ता खालका चुनौतीहरुको सामना गर्नु परेको छ ?
वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले काम गर्दा कुनै पनि किसिमको चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छैन। जस्तो अपठ्यारो परिस्थितिमा पनि हामीलाई जनताको साथ र सहयोग हरदम पाएका छौं । सबैसंग सल्लाह र सुझाव लिएर अगाडी बढ्ने गरेकोले हामीले त्यस्ता खालका चुनौतीको सामना गरेका छैनौं। मेरो सिद्धान्त भनेकै स्थानियको घर दैलोमा गएर उहाँहरुको समस्या बुझेर समाधान गर्नु हो। तपाई आफै पनि आएर बुझ्न र सोध्न सक्नुहुन्छ। पारदर्शी काम नै गर्दै आएका छौं।
Published Date: 2021-09-18 20:58:00
मागेर खानेहरुलाई दशैं कहिले आउला ? शनिबार, असोज २, २०७८, २०:५८:००
मन, वचन र कर्ममा शुद्धता, कार्यदक्षता अनि प्रतिवद्धताका प्रतिक वडा अध्यक्ष शुद्ध डंगोल शनिबार, असोज २, २०७८, २०:५८:००
न्यायमा महिलाको पहुँच शनिबार, असोज २, २०७८, २०:५८:००
स्थानिय निकाय घर-आँगनको सरकार शनिबार, असोज २, २०७८, २०:५८:००